नव इन्द्रेणी युवा क्लवले हाल्यो बुङकोटमा पिङ - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
मदन विश्वकर्मा : गोरखाको शहीदलखन गाउँपालिका वडा नम्बर ८ बुङकोटमा युवाहरुले पिङ हालेका छन् । नव इन्द्रेणी बुङकोट युवा क्लवको सक्रियतामा दशैँको लागि आईतवार पिङ हालिएको क्लवका सचिव रुपक श्रेष्ठले बताए ।
हरेक वर्ष क्लवले रोहोँटे, जाँते पिङ हाल्ने गरेको छ । ‘दशैँको रौनक मध्ये एक पिङ हो’ नव इन्द्रेणी युवा क्लवका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भने ‘युवाहरुले आफ्नो संस्कृती, परम्परा लोप हुन नदिन अग्रसरतामा पिङ हालेका हौँ ।’
अहिले गोरखाको ग्रामिण भेगमा लिङ्गे पिङ, जाँते पिङ, पिर्के पिङ हाल्ने गरेको पाईन्छ । तर हरेक वर्ष पिङको संख्या भने घट्दो देखिन्छ । पहिलो पहिलो बाबियो बाटेर लठ्ठा बनाउने र बाँसको लिङ्गा गाडेर पिङ हाल्ने गरिन्थ्यो ।
अहिले धेरैजसो डोरीको लठ्ठाको पिङ देखिन्छ । विगत दशैँ आउनुअघि नै कोहि डोरी त कोहि बाँस तथा काठको जोहो गर्न थाल्थे अहिले विभिन्न जिल्लामा रङ्गटे र लिङ्गे पिङ्गको रौनक चलि आएको छ ।
दशैँका बेला गाउँका चौतारी, दोबाटो र डाँडामा जम्मा भएर सामूहिक लिङ्गे पिङ्ग र रङ्गटे पिङ्ग खेल्ने र रमाइलो गर्ने परम्परा चलिआएको छ ।